Lakkoofsi nama hospitaala gala jiru sababa Covid-19 State Siouxland sadiin keessattu baaye guddataa | KWIT
Oromo News 10.26.2020
Ogeessi Nebraska akka jedhetti dhiheessa kunuunsa fayyaa fi nama guddaafi jiraattota nama rakkoo qabanii vaccination corona virus kan ji’aa kana hiriirra jalqaba irra akka taa’an himan. Gabaasnis kan dhufee erga guyyaa sanbata Nebraska keessati namni Covid-19 harawnii 436 argame booda.
Kuni Kanaan osoo jiru, website corona virus kan South Dakota akka mullisutti “Substantial community spread” County hunda kan Sioux land keessatti , Union County dabalatee nama 725 kan qabameefi namni due 11 dabalate.
Jiraattoni Iowa 900,000 ol ta’an filannoo November tiif ballot fillaloo xalayatiif filatanii jiru. Nama 750,000 olii ta’an ammo akkaata seera Iowa secretary state taatif jetetii filanoon jaraa ergamee jira. Filannoo dursamee filatamuu waggaa afur dura nama 400,000 ture.
Iowa fi Nebraska keessati snow bu’ee records akka torbaani akka cabse himan. Sioux City keessati inches sadi ture. Record jalqabaa inche .7 kan bara 1918 bu’e ture. Communities biraa keessati kan baaye bue kan akka Norfolk, Nebraska inche 4 fi Ocheyendan inchi 6 oldha.
Guyyaa kaleessa nama haarawa Covid-19 qabame US keessati 70,000 kunis
By Fatiya Adam • Oct 23, 2020
Oromo News 10/23/20
Guyyaa kaleessa nama haarawa Covid-19 qabame US keessati 70,000 kunis jia sadihii as ka akkanati hin mulanne ture, akkasumas namni hospitaala galuu gudachu jira. Guyyaa kamsaas akka July 24 asiitii namni bayani kan qabame sadarkaa waliigala afraffaa irra jira, akkaata gabaasa John Hopkins University nama 71,671 dha.
State Iowa guyyaa har’aa dabalataan sababa Covid-19 namni 15 du’uu gabaasan
By Fatiya Adam • Oct 22, 2020
Oromo News 10/22/20
State Iowa guyyaa har’aa dabalataan sababa Covid-19 namni 15 du’uu gabaasan, nama tokko Woodbury County keessa kajiru dabalatee, waliigalatti nama 90 gaheera.
Waliigalatti namni dabalataan har’aa qabame akka state guututi nama 1,400 dha jedhan.
Ogeessi fayyaa akka gabaaseti namni 530 hospitaala Iowa keessati sababa corona virus yaalamu jira, guyyaa harbaa namni hospitaala jira kara 535 guddatee jira.
Mani fayyaa Siouxland akka jedhetti hospitaali lama keessati nama 70 Covid-19 qabaman yaalamu jira.
Namni corona virus qabamu Iowa keessati akkuma guddataa deemu jira.
By Fatiya Adam • Oct 21, 2020
Oromo News 10/20/20
Namni corona virus qabamu Iowa keessati akkuma guddataa deemu jira. Iowa guyyaan sababa Covid-19 nama due baaye gabaaste jirti. Guyyaa har’aa namni sababa corana virus due 31 yoo tau waliigalatti haarawa kan qabame ammo 1,276 dha. State namni waliigalatti due 1,579 dha. Akka gabaasa website corona virus guyyaa har’aa namni corona virus qabame 646 dha.
Lakkoofsi nama hojii dhabdummaa guutate erga sababa corona virus rakkoon baayen irra gahe booda gad
By Fatiya Adam • Oct 20, 2020
Lakkoofsi nama hojii dhabdummaa guutate erga sababa corona virus rakkoon baayen irra gahe booda gad xiqqaachu jalqabe. September keessa 4.7% gad xiqqaate erga jia shan keessati.
Biroon hojattoota Iowa akka jedhetti namni hojii dhabdummaa guutatu August as persanti 6% xiqqaate jira. hoji dhabdooni U.S September keessa 7.9% ture.